Collagen (သို့) နုပျိုခြင်းရဲ့ သော့ချက် - Barnyar Barnyar
May 5, 2022 thanzin laypyay အလှအပရေးရာ 0
အမျိုးသမီးများအကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုလာဂျင်ဆိုတာ ဘာလဲ
ဒီနေ့ အမျိုးသမီးများအကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ကိုလာဂျင်ဆိုတာ ဘာလည်း ဆိုတာကို အရင်ဆုံးပြောမှ ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုလာဂျင်ဆိုတာ ဘာလဲ….
ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရိုး၊ ကြွက်သား ၊ အဆီဓာတ် ရေဓာတ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ တွယ်ဆက်တစ်ရှုးတွေရဲ့ အဓိကပရိုတင်းက ကိုလာဂျင် ဖြစ်ပြီး ကိုလာဂျင်ကို အမိုင်နိုအက်စစ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်အရွယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ကိုလာဂျင်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မို့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ကိုလာဂျင် ပရိုတင်းတွေရဲ့ နေရာကို အစားပြန်ထိုးနိုင်စွမ်း ကျလာတယ်။
ဒီအခါမှာပဲ အရေပြား ပျော့တွဲခြင်းများ အရေးအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်မှုများ စတင်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ ပြောရရင် ကိုလာဂျင်ဟာ အရေပြားအတွက် အလွန်ကောင်းကျိုးပေးနိုင်တယ်။ အရိုးအဆစ် ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းစေတယ်။
အနာကို အကျက်မြန်စေတယ်။ ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်နိုင်တယ် ဆိုတာတွေကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုလာဂျင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်လက်လို့ သုတေသနများ ပြုလုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကိုလာဂျင်သောက်ဆေး” ကိုလာဂျင်သောက်ဆေးကို အမှုန့်ပုံစံ အရည်ပုံစံ စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ဆေးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုလာဂျင်သောက်ဆေးတွေရဲ့ ဆေးပမာဏက ဘယ်လောက်ထိ ပါဝင်သလဲ၊ ဘယ်ကဲ့သို့ သောက်ရမလဲ၊ ဘာတွေနဲ့ မတည့်သလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ စွဲပြီး သောက်ရမှာလဲ၊ ဘာတွေရှောင်ရမှာလဲ ဆိုတာတွေကို သေချာသိအောင် လုပ်ရပါမယ်။
ထိုးဆေးဆိုရင် ပိုပြီးသတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဝယ်ယူသည့်နေရာ အာမခံချက် FDA အသိအမှတ်ပြုမှုရှိရဲ့လား ပစ္စည်းစစ်မစစ် စတာတွေကို အရင်ဆုံးစစ်ဆေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဒီထိုးဆေးကို ထိုးပေးသူက ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လိုပြီး သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကလည်း အဓိကကျပါတယ်။
ကိုလာဂျင်ဆေးနဲ့သင်နဲ့ ဓာတ်တည့်မတည့်လဲ အရင်စစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုလာဂျင်ထိုးဆေးကို မျက်နှာပြင်ပေါ်က Smile linesတွေ အရေးအကြောင်းတွေ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ ပျောက်ကင်းဖို့ ထိုနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားအဆီ ဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့ နှုတ်ခမ်းပြည့်ဖူးဖို့ လက်ဖမိုးအရေပြားပြည့်တင်းဖို့လည်း ထိုးနိုင်ပါတယ်။
ကိုလာဂျင်ကို ခရင်မ်တွေ လိုးရှင်းတွေထဲမှာလည်း ထည့်သွင်း ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။
သို့သော် ကိုလာဂျင် မော်လီကျုးတွေက အရေပြားထဲကို ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့အတွက် ကိုလာဂျင် ပရိုတင်းရဲ့အာနိသင်ကို အပြည့်အဝ မရနိုင်ပါ။
ဖြည့်စွက်ဆေးသောက်ဆေး ထိုဆေးများအပြင် ကိုလာဂျင်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကို စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုလာဂျင်ပါဝင်တဲ့ အစားစအစာတွေကလည်း ပိုမိုထိရောက်ပါတယ်။
ကီဝီသီး ထောပတ်သီး ဘယ်ရီသီး လိမ္မော်သီး မုန်လာဥ ပန်းမုန်လာ အစိမ်းရင့်ရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ငရုပ်ကောင်း သခွားမွှေး ကြက်သွန် ဖရုံစေ့ အယ်လ်မွန်စေ့ ခရမ်းချဉ်သီး ငါး ချိစ် နို့ ဥအမျိုးမျိုး လိငုင်စင်းနဲ့ပရိုတင်း ဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ အသား ပဲသီးတောင့် ကြက်ဥအကာ ဂျုံစပါး စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလာဂျင် အပြည့်အဝရစေမဲ့ အစား အစာများကို ရွေးချယ်စားသုံးခြင်းဖြင့် သင့်အသားအရေ ပြည့်တင်းမှုကိုအရယူပါ……။
အမြိုးသမီးမြားအကွားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကိုလာဂငျြဆိုတာ ဘာလဲ
Collagen (သို့) နုပြိုခွငျးရဲ့ သော့ခကျြ
ဒီနေ့ အမြိုးသမီးမြားအကွားမှာ ရပေနျးစားနတေဲ့ ကိုလာဂငျြဆိုတာ ဘာလညျး ဆိုတာကို အရငျဆုံးပွောမှ ရလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ကိုလာဂငျြဆိုတာ ဘာလဲ….
ခန်ဓာကိုယျကို ကွညျ့မယျဆိုရငျ အရိုး၊ ကွှကျသား ၊ အဆီဓာတျ ရဓောတျတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားတာကို တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျတဈခုလုံးမှာရှိနတေဲ့ တှယျဆကျတဈရှုးတှရေဲ့ အဓိကပရိုတငျးက ကိုလာဂငျြ ဖွဈပွီး ကိုလာဂငျြကို အမိုငျနိုအကျစဈတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတာဖွဈပါတယျ။
အသကျအရှယျ ကွီးလာတာနဲ့အမြှ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ကိုလာဂငျြထုတျလုပျမှု ကဆြငျးလာပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့မို့ ဆုံးရှုံးသှားတဲ့ ကိုလာဂငျြ ပရိုတငျးတှရေဲ့ နရောကို အစားပွနျထိုးနိုငျစှမျး ကလြာတယျ။
ဒီအခါမှာပဲ အရပွေား ပြော့တှဲခွငျးမြား အရေးအကွောငျး ဖွဈပျေါမှုမြား စတငျလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ သုတသေနအရ ပွောရရငျ ကိုလာဂငျြဟာ အရပွေားအတှကျ အလှနျကောငျးကြိုးပေးနိုငျတယျ။ အရိုးအဆဈ ကနျြးမာရေးအတှကျ ကောငျးစတေယျ။
အနာကို အကကျြမွနျစတေယျ။ ကွှကျသားဆုံးရှုံးမှုကို ကာကှယျနိုငျတယျ ဆိုတာတှကေို တှရှေိ့ခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ကိုလာဂငျြနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆကျလကျလို့ သုတသေနမြား ပွုလုပျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
“ကိုလာဂငျြသောကျဆေး” ကိုလာဂငျြသောကျဆေးကို အမှုနျ့ပုံစံ အရညျပုံစံ စသဖွငျ့ အမြိုးမြိုး ထုတျလုပျပါတယျ။
ဖွညျ့စှကျဆေးအဖွဈ ထုတျလုပျထားတဲ့ ကိုလာဂငျြသောကျဆေးတှရေဲ့ ဆေးပမာဏက ဘယျလောကျထိ ပါဝငျသလဲ၊ ဘယျကဲ့သို့ သောကျရမလဲ၊ ဘာတှနေဲ့ မတညျ့သလဲ၊ ဘယျလောကျကွာကွာ စှဲပွီး သောကျရမှာလဲ၊ ဘာတှရှေောငျရမှာလဲ ဆိုတာတှကေို သခြောသိအောငျ လုပျရပါမယျ။
ထိုးဆေးဆိုရငျ ပိုပွီးသတိထားဖို့ လိုပါတယျ။ အဓိကကတော့ ဝယျယူသညျ့နရော အာမခံခကျြ FDA အသိအမှတျပွုမှုရှိရဲ့လား ပစ်စညျးစဈမစဈ စတာတှကေို အရငျဆုံးစဈဆေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီးဒီထိုးဆေးကို ထိုးပေးသူက ဆရာဝနျဖွဈဖို့လိုပွီး သူ့ရဲ့ကြှမျးကငျြမှုကလညျး အဓိကကပြါတယျ။
ကိုလာဂငျြဆေးနဲ့သငျနဲ့ ဓာတျတညျ့မတညျ့လဲ အရငျစဈဖို့ လိုပါတယျ။
ကိုလာဂငျြထိုးဆေးကို မကျြနှာပွငျပျေါက Smile linesတှေ အရေးအကွောငျးတှေ ဝကျခွံအမာရှတျတှေ ပြောကျကငျးဖို့ ထိုနိုငျပါတယျ။ အရပွေားအဆီ ဓာတျပွနျလညျဖွညျ့တငျးဖို့ နှုတျခမျးပွညျ့ဖူးဖို့ လကျဖမိုးအရပွေားပွညျ့တငျးဖို့လညျး ထိုးနိုငျပါတယျ။
ကိုလာဂငျြကို ခရငျမျတှေ လိုးရှငျးတှထေဲမှာလညျး ထညျ့သှငျး ထုတျလုပျကွပါတယျ။
သို့သျော ကိုလာဂငျြ မျောလီကြုးတှကေ အရပွေားထဲကို ထိုးဖောကျနိုငျစှမျး မရှိတဲ့အတှကျ ကိုလာဂငျြ ပရိုတငျးရဲ့အာနိသငျကို အပွညျ့အဝ မရနိုငျပါ။
ဖွညျ့စှကျဆေးသောကျဆေး ထိုဆေးမြားအပွငျ ကိုလာဂငျြပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြားကို စားသုံးပေးနိုငျပါတယျ။ ကိုလာဂငျြပါဝငျတဲ့ အစားစအစာတှကေလညျး ပိုမိုထိရောကျပါတယျ။
ကီဝီသီး ထောပတျသီး ဘယျရီသီး လိမ်မျောသီး မုနျလာဥ ပနျးမုနျလာ အစိမျးရငျ့ရောငျ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ ငရုပျကောငျး သခှားမှေး ကွကျသှနျ ဖရုံစေ့ အယျလျမှနျစေ့ ခရမျးခဉျြသီး ငါး ခြိဈ နို့ ဥအမြိုးမြိုး လိငုငျစငျးနဲ့ပရိုတငျး ဓာတျတှပေါဝငျတဲ့ အသား ပဲသီးတောငျ့ ကွကျဥအကာ ဂြုံစပါး စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ကိုလာဂငျြ အပွညျ့အဝရစမေဲ့ အစား အစာမြားကို ရှေးခယျြစားသုံးခွငျးဖွငျ့ သငျ့အသားအရေ ပွညျ့တငျးမှုကိုအရယူပါ……။